Ngeshwa, iziyaluyalu wokugaya ukudla akuzona izinkinga ezingavamile. Esophagitis, izilonda emathunjini of nolwelwesi lwamafinyila - isifo sína futhi eziyingozi. Yiqiniso, ziba izifo ezifana ngabe yikuphi hhayi zinkulu. imithi yesimanje inikeza inqwaba yezidakamizwa futhi omunye ephumelela ngempela Isidakamizwa "Zolopent" (40 mg). Yokusetshenziswa ulula, futhi umphumela ukwelashwa okuhle.
Yiqiniso, iziguli eziningi ngaphambi kokuqala ukwelashwa ufuna ukwaziswa okwengeziwe ngale imithi. Yini ehlanganisiwe ngezithako zawo nokuthi kuyithinta kanjani umzimba? Ingabe ikhona contraindications amaphilisi? Ingaba khona nanoma yiziphi izinkinga ngesikhathi yokwelapha? Kanjani ukukhuluma ngemithi iziguli kanye kungaba iphumelela kangaka ngempela? Izimpendulo zale mibuzo ziyoba abafundi abaningi.
Tablets "Zolopent" (40 mg) image, futhi incazelo Ukwakheka ukukhululwa ifomu
Lesi sidakamizwa ngokuvamile sisetshenziswa imithi yesimanje. Ngokwemvelo, izithakazelo nesineke ngemibuzo mayelana nendlela bheka imithi "Zolopent" 40 mg, kwaba nabantu bezizwe ezixubile imfundo, imithetho isicelo nokuningi. D.
Njengoba aziwa kakade, ekhiqizwa ngesimo amaphilisi, amaphilisi camera, okuyinto ancibilikisa emathunjini. Ekhemisi ungathenga amabhamuza amaphilisi angu-10 noma 14. The main asebenzayo izingxenye umuthi ngesimo pantoprazole sodium seksvigidrata. Omunye sibhebhe sinamaphutha 40 mg ketshezi.
Ngokwemvelo, ezinye izingxenye asizayo lisetshenziswe ukukhiqizwa. Ukwakheka izidakamizwa samanje sodium anhydrous carbonate, i-calcium stearate, crospovidone, sodium lauryl sulfate, cellulose hydroxypropyl futhi titanium dioxide, triethyl citrate, talc, futhi ephuzi yensimbi oxide.
izakhiwo ezinkulu kwemithi zomuthi
Pantoprazole isebenze parietal amaseli ngaphansi kwethonya hydrochloric acid. Lokhu kwaziswa anezakhi eyigugu kakhulu, ngoba izinqubo kuvimbela esiswini acid uketshezi ngu ekuvimbeni futha proton amaseli ethize secretory.
Kuyaphawuleka ukuthi inqubo okusithiyayo kuyinto wakhona umthamo wathola imithi, nge imiphumela yokuqala ukuvela ngemuva kwamahora 2 kuphela ngemva ukungenisa ezibhebheni. Lesi sidakamizwa kunciphisa asidi we esiswini, kube kwandziswa ezingeni uketshezi of gastrin. Kuyaphawuleka ukuthi ukwanda ziphikelele inani enzyme siyenzeka ngesikhathi yokwelapha isikhathi eside kuphela.
Pharmacokinetics futhi ikakhulukazi ukumuncwa izidakamizwa
Njengoba sekuphawuliwe, amaphilisi camera, okuyinto ancibilikisa emathunjini. Isithako asebenzayo zomuthi ukumuncwa okusheshayo odongeni wamathumbu. Ubuningi esiphezulu we ketshezi egazini waphawula ngemva umthamo owodwa we imithi, emahoreni amabili kamuva. By the way, yokwamukela njalo inikeza ukwanda eziphikelelayo ngobungako ingxenye esebenzayo emzimbeni womuntu.
Pantoprazole kuyinto 98% eboshiwe plasma amaprotheni. Izinqubo umzimba efana zenzeka kuphela kumaseli isibindi. Cishe ama-80% we-metabolites excreted ngu izinso, kuyilapho abanye - ne indle.
Tablets "Zolopent 40 mg": izinkomba ngoba
Yiqiniso, inkinga ebalulekile izinkomba yokwelapha. Ngakho lapho izimo iziguli kuyabekwa amaphilisi "Zolopent" 40 mg? Kusukela lokho kusiza izidakamizwa?
isilonda esiswini kanye isilonda duodenal;
Zollinger - Ellison syndrome, futhi ezinye izifo ephelezelwa hypersecretion nezindlala;
Helicobacter pylori wokuqeda kubantu abaphethwe izilonda emathunjini of nolwelwesi lwamafinyila we ipheshana wokugaya ukudla.
Indlela yokusebenzisa umuthi? Imiyalelo kanye ezijwayelekile
Ngokushesha kufanele kusho ukuthi udokotela kuphela angakunika umuthi eyanele "Zolopent" 40 mg. Yokusetshenziswa kuphela iqukethe ezinye ulwazi olujwayelekile, umthamo kanye isikhathi sokwelashwa kunqunywa ngamunye.
Okokuqala, ake sithi ukuthi iphilisi Kunconywa ukuba kuthathwe ihora elilodwa ngaphambi kokudla. Ngeke ukusiqeda noma ukuhlafuna - udinga ukugwinya ngokuphelele, ingilazi isibambo yamanzi.
Uma kuziwa ekwelapheni Reflux - esophagitis ukuthi iziguli Kunconywa ukuthatha esinye isibhebhe sibonisa zomuthi ngosuku. ngezikhathi ezithile kuphela ukwandisa umthamo kuya ku-80 mg isithako esisebenzayo. nqubo yokwelapha ithatha cishe 4 amaviki.
Uma kunguwe isilonda peptic, lakhula ngemuva womsebenzi Helicobacter, umthamo nsuku zonke amaphilisi 2. Umuthi esithathwayo inhlanganisela ngemithi elwa namagciwane, ngokukhethekile nge "clarithromycin" futhi "amoxicillin".
Ukwelashwa isilonda esiswini ihlala amaviki 4, phakathi kwesikhathi lapho isiguli ukuthatha omunye (ngezinye izikhathi 2 amaphilisi) ngelanga.
Ngo esidalwa yizilonda emathunjini sibe emathunjini lesion umthamo lamahubo lilingana, kodwa ukwelashwa Akuthathi kwamasonto amabili, ngemva kwalokho-ke Kunconywa ukuthatha ikhefu.
Umthamo kanye nobude ukwelashwa iziyaluyalu imisebenzi secretory, kanye Zollinger - Ellison kuncike ngezinga elithile ngobucayi isifo futhi umphumela ukuthatha amaphilisi.
Akuzona zonke izimo ncamashi ngendlela echazwe ngenhla iziguli ukuthatha amaphilisi "Zolopent" 40 mg. Manual ubonisa ukuthi ngezinye izikhathi ukwelashwa ezinye ukulinganiselwa. Ikakhulukazi, abantu abanale nkinga yokungadli kahle ezinzima esibindini kuyadingeka ukuze inciphise yansuku zonke izidakamizwa kufika ku-20 mg. Ngezinye efanayo thuthuva isikhathi izinso akuzona inkomba umthamo ukulungiswa.
Iziguli Zollinger - Ellison makamthathe izidakamizwa isikhathi eside. Ukwelapha okunjalo kungaholela malabsorption vitamin B12 kanye exchange, okuyinto iyingozi ngempela. Yingakho, kanye ngokuthatha izidakamizwa iziguli ebekiwe neminye imithi, ikakhulukazi labo ezikhipha Vitamin kwamaphutha.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ukwelashwa eside (isibonelo, ihlala isikhathi esingaphezu konyaka) nomthelela amathambo aqatha, okwandisa ingozi waphuka.
Yiqiniso, iziguli unesithakazelo umbuzo ukuthi zonke izigaba iziguli kungathatha lesi sidakamizwa "Zolopent" 40 mg. Iziyalezo yokusetshenziswa luthi abanye bába imikhawulo ukuqhuba yokwelapha bakhona, nakuba bengebona kangaka.
Ikakhulu, i-izidakamizwa aluboniswa in iziguli hypersensitivity kunoma yikuphi nabavoti. Futhi, ukwelashwa hhayi eyenziwa uma uma umuntu engezwani kunoma yiziphi izinto - nemikhiqizo benzimidazole.
Yiziphi ezinye izimo akudingekile ukuthatha amaphilisi "Zolopent" 40 mg? Izimo - liphinde engu yezingane kanye inkathi ibele. Ngezinye izikhathi odokotela linqume le imithi kwabesifazane abakhulelwe, ngoba ngalesi sikhathi, eziningi ucansi fair uhlushwa isilungulela. Noma kunjalo, ngokuthatha izidakamizwa ngokungemthetho akufanele ke, ikakhulukazi uma kuziwa sokukhulelwa.
yezinkinga side effects ezingenzeka
Kuyinto imfihlo ukuthi ukuthathwa umuthi othize kwezinye iziguli zikhona njalo engemihle. Kungenzeka yini phakathi ukwelashwa nge 'Zolopent "40 mg? Manual kubonisa ukuthi izinkinga zingenzeka, nakuba zikhona ayeyivelakancane:
on the ingxenye isimiso sokugaya ukudla bungene kungenzeka izimpawu ezifana nomlomo owomile, ukuvuvukala, ukuqunjelwa nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza.
ezinye iziguli yokuphazamiseka isimiso sezinzwa, ngokukhethekile, isiyezi, ubuhlungu bekhanda, okushintshiwe ukunambitheka ukuzwa;
futhi kungenzeka ezinye nokugula ngengqondo ezinjengokucindezeleka, ukudideka, izinkinga sokulala, disorientation futhi babone izinto ezingekho;
Endabeni ka hypersensitivity kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni engaveza njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, kuhlanganise ukushaqeka anaphylactic;
ohlwini imiphumela emibi ibandakanya leukopenia, pancytopenia, agranulocytosis futhi tromotsitopeniyu;
Ezinye iziguli esekhala ukukhathala jikelele, ukukhathala anda, ukozela, edema neuropathy;
Ukwelashwa kungase ukuthuthukisa myalgias futhi arthralgias.
Lapho izimpawu uncharacteristic, Ukuwohloka kwempilo, kubalulekile ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze abone udokotela. Ngezinye izikhathi ukuqeda imiphumela emibi nje kudingeka ulungise umthamo.
Ingabe ukweqisa izidakamizwa kungenzeka?
Kwenzekani uma uthatha liphezulu kakhulu umthamo we imithi "Zolopent" 40 mg? Ukufundiswa uthi amacala izidakamizwa ukweqisa izidakamizwa ezingazange ngokomthetho kuze kube manje. Nokho, abacwaningi bayavuma ukuthi ukuthathwa inani elikhulu amaphilisi angagcina kakhulu imithi emizimbeni yabo. Ezimweni ezinjalo, kuboniswa lavage esiswini ukuthola futhi sorbents. Uma kukhona izinkinga ezithile zokumpontshelwa kunconywa ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuba afune usizo lwezokwelapha.
Njengoba ezinye zezidakamizwa ongahlanganyela iphilisi "Zolopent" 40 mg. Iziyalezo yokusetshenziswa aqukethe ulwazi olulandelayo:
Pantoprazole, kwezinye izimo, kunciphisa ukusebenza izidakamizwa, bioavailability incike asidi of juice esiswini. Isibonelo ukubeka abanye antifungals, e itraconazole ethile, ketoconazole futhi t. D.
Futhi futha proton inhibitor kakhulu ukunciphisa digestibility izidakamizwa esetshenziswa ekwelashweni kokushiyeka umzimba ezifweni, nemithi ukutheleleka nge-HIV.
Uma isiguli kuthatha ngesikhathi esifanayo "Zolopent" futhi anticoagulants, kubalulekile ukuqapha ngokucophelela ngezimo zesiguli, njengoba kungase kubangele ukopha.
Kuyaphawuleka ukuthi phakathi ucwaningo engakaze waphawula iyiphi kwezinso ezimweni lapho "Zolopent" amaphilisi athathwa kanye nabanye antacids namanxusa elwa namagciwane. Kunoma ikuphi, kufanele wazise udokotela wakho mayelana zonke imithi abayiswa.
Ngokwemvelo, intengo izidakamizwa - iphuzu elibalulekile ngoba esigulini ngasinye. Kuyaqondakala ukuthi akunakwenzeka ukuba ucacise Izindleko ezishaya emhlolweni ngoba kuncike ezintweni eziningi. Ikakhulukazi, inani kuzoncika inani amaphilisi e amaphasela umenzi, inqubomgomo yokwangasese Ikhemisi t. D.
Ngokwesibonelo, iphakethe amaphilisi 14 kubiza cishe 180 - ruble angu-210. Intengo emaphaketheni kakhulu ehlanganisa amaphilisi 30, ububanzi ruble 360 kuya 420. Kuyaphawuleka ukuthi ngezinye izikhathi izifundo ezigcwele yokwelashwa kudingeka okungaphezu kokukodwa iphakethe. Yiqiniso, amanani izidakamizwa akuzona ukuthi ongaphakeme. Nokho, ezinye izidakamizwa ne ezifanayo kodwa ngesikhathi esifanayo nibaluleke izikhathi eziningana ezibizayo.
Ingabe ikhona analogue of the izinga izidakamizwa?
Ngeshwa, ngezizathu ezithile, kungaba khona Izimo noma izindleko okungalungile, akuzona zonke iziguli umuthi efanelekayo. Ngakho kungaba yini esikhundleni izidakamizwa "Zolopent" 40 mg?
Analogs Yiqiniso, zikhona, futhi emakethe yesilungu yanamuhla inikeza lenqwaba izidakamizwa ukuthi babe emzimbeni womuntu mayelana nomphumela ofanayo. Ngokwesibonelo, e iziguli peptic isilonda ngokuvamile linqume ejenti ezifana "Barolo", "Gasek" "Veloz". Ukuze analogue ezinhle futhi zihlanganisa "Zertsim", "Diaprazol" futhi "Lanzap". Futhi, kungenziwa lezi amaphilisi esikhundleni ngeminye imithi, ngokukhethekile, "Nolpaza", "Lorsek", "Ozol", "Panotsid" kanye nabanye.
Uphenyo kodokotela neziguli mayelana amaphilisi
Ngemva kokuxoxa neziguli asebethole wakwazi ukuthatha inkambo yokwelapha, ungathola ulwazi oluningi oluwusizo. Ngakho lokho abasho mayelana "Zolopent" ekwakhiweni (40 mg)? Izibuyekezo ingxenye enkulu akhayo. Ngokwemvelo, ngoba ukwelashwa okuphelele kuthatha isikhathi, kodwa imiphumela yokuqala ukuvela ngemuva kwamaminithi ambalwa ngemva ukungenisa. Ngokwesibonelo, i-tablet ngokushesha ukuqeda isilungulela umunyu umlomo, khulula soreness.
Odokotela bathi futhi ngemithi indlela efanele kuyasiza ngempela ukuqeda isifo. Ngaphezu kwalokho, ayivamile ukubangela emibi, kanye contraindications akuzona eziningi kangaka. Ububi ingabe ukuthi izindleko kuqhathaniswa eliphezulu amaphilisi, nakuba ezinye nozakwabo yakhe izobiza imali eningana. Ngakolunye uhlangothi, ezempilo liyakufanelekela noma ikuphi imali. Futhi izidakamizwa Kulula ukuthola njengoba bayidayise cishe kunoma iyiphi ekhemisi. Eminyakeni embalwa edlule, umuthi yatha- kokubili phakathi kodokotela kanye iziguli.
"Oka" - imithi kwemithi ama-NSAID iqembu
I-Tablet "Taran" Kushisa bhé kule ndawo